Elevator Escalator Tooling Production Line Productionrs - China Elevator Escalator Tooling Production Line Production & Factory
Ndị ọrụ na - arụ ọrụ bụ ụdị ngwa ọrụ na - agba ọsọ nke ejiri igwe na - ebu eriri na - enye ihe eji eme ihe na eriri pụrụ iche. O nwere otutu uru di ka ikike njem buru ibu, ndi oru ugbo n’enye ndi njem. Yabụ ihe achọrọ nchekwa dị elu karịa akụrụngwa ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe n'ebe ọha na eze na-enwetakarị mgbasa ozi mmadụ, dịka ụlọ ahịa, klọb, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ elu. Mwube ihe Isi mbanye ahụ ezuola…